အမြိုးသား+အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈဖို့ နောကျထပျ(၇၈)ဂိုးအထိ စီရျောနယျလျဒို သှငျးယူဖို့လိုအပျ – the One Sports Journal
ပျေါတူဂီအသငျးရဲ့နာမညျကြျောကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုဟာ ပွငျသဈအသငျးနဲ့ နှဈဂိုးစီသရကေခြဲ့တဲ့အုပျစုနောကျဆုံးပှဲတုနျးက ပယျနယျတီကနေ (၂)ဂိုးသှငျးယူခဲ့တာကွောငျ့ သူ့ရဲ့လကျရှေးစငျကစားသမားဘဝတဈလြှောကျ စုစုပေါငျး(၁၀၉)ဂိုးနဲ့ အီရနျဂန်ထဝငျကစားသမားအလီဒါယီ တငျရှိထားတဲ့ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးအမြားဆုံးစံခြိနျကို အမီလိုကျနိုငျခဲ့တာ အားလုံးအသိပါပဲ။ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့ ပျေါတူဂီအသငျးဟာ ရှုံးထှကျ(၁၆)သငျးအဆငျ့ကို တကျရောကျနိုငျပွီဖွဈတာကွောငျ့ အဲဒီပှဲမှာဂိုးသှငျးနိုငျရငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ အလီဒါယီရဲ့စံခြိနျကို ခြိုးဖကျြနိုငျမှာပါ။
ဒါပမေဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဘောလုံးသမိုငျးတဈလြှောကျလုံးမှာတော့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမားအဖွဈ သမိုငျးမှတျတမျးရေးထိုးနိုငျဦးမှာမဟုတျသေးပါဘူး။ စီရျောနယျလျဒိုအနနေဲ့ အမြိုးသားဘောလုံးသမားတှထေဲမှာသာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျနိုငျမှာဖွဈပမေယျ့ အမြိုးသား+အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈဖို့ဆိုရငျ နောကျထပျ(၇၈)ဂိုးအထိ သှငျးယူဖို့လိုအပျနပေါပွီ။
အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ စီရျောနယျလျဒို၊ မကျဆီတို့ထကျ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးပိုမြားတဲ့သူတဈဦးရှိပွီး သူမနာမညျကတော့ ခရစ်စတငျးဆငျကလဲယားပဲဖွဈပါတယျ။ အသကျ(၃၈)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈသူ ကနဒေါလကျရှေးစငျအသငျးခေါငျးဆောငျ ဆငျကလဲယားဟာ တိုကျစဈမှူးတဈဦးဖွဈပမေယျ့ အမြားအားဖွငျ့တော့ ကှငျးလယျတိုကျစဈကစားသမားနရောမှာသာ ကစားလရှေိ့ပါတယျ။
သူမဟာ ကနဒေါအသငျးအတှကျ ၂၀၀၀ ခုနှဈကတညျးက စတငျကစားခဲ့သလို လကျရှိအခြိနျအထိဘောလုံးကစားနဆေဲဖွဈပွီး (၂၉၉)ပှဲကစား၊ (၁၈၆)ဂိုးအထိသှငျးယူထားတာပါ။ ဆငျကလဲယားဟာ ကနဒေါအသငျးနဲ့အတူ အမြိုးသမီးကမ်ဘာ့ဖလား(၅)ကွိမျ၊ အိုလံပဈဘောလုံးပွိုငျပှဲ(၂)ကွိမျဆငျနှဲခဲ့ပွီး ကွေးတံဆိပျဆုတှဆှေတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ဆငျကလဲယားအတှကျ ဂုဏျယူစရာကောငျးတာက အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုးအမြားဆုံးအဖွဈ ရပျတညျခဲ့တဲ့ အမရေိကနျနာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးဟောငျး အကျဘီဝမျဘကျချြရဲ့ (၁၈၄)ဂိုးစံခြိနျကို ခြိုးဖကျြနိုငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
လကျရှိအခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒိုဟာ နိုငျငံတကာသှငျးဂိုး (၁၀၉)ဂိုးအထိသှငျးယူခဲ့ပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အမြိုးသား+အမြိုးသမီးဘောလုံးသမားတှထေဲမှာ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးဖွဈဖို့အတှကျ ဆငျကလဲယားရဲ့စံခြိနျကို ခြိုးဖကျြဖို့လိုအပျနပွေီး အဲဒီလိုဖွဈဖို့က နောကျထပျ(၇၈)ဂိုးအထိ ဆကျလကျသှငျးယူရဦးမှာပါ . . .
အမျိုးသား+အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ဖို့ နောက်ထပ်(၇၈)ဂိုးအထိ စီရော်နယ်လ်ဒို သွင်းယူဖို့လိုအပ်
ပေါ်တူဂီအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ပြင်သစ်အသင်းနဲ့ နှစ်ဂိုးစီသရေကျခဲ့တဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲတုန်းက ပယ်နယ်တီကနေ (၂)ဂိုးသွင်းယူခဲ့တာကြောင့် သူ့ရဲ့လက်ရွေးစင်ကစားသမားဘဝတစ်လျှောက် စုစုပေါင်း(၁၀၉)ဂိုးနဲ့ အီရန်ဂန္ထဝင်ကစားသမားအလီဒါယီ တင်ရှိထားတဲ့ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးအများဆုံးစံချိန်ကို အမီလိုက်နိုင်ခဲ့တာ အားလုံးအသိပါပဲ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့ ပေါ်တူဂီအသင်းဟာ ရှုံးထွက်(၁၆)သင်းအဆင့်ကို တက်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီပွဲမှာဂိုးသွင်းနိုင်ရင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ အလီဒါယီရဲ့စံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်မှာပါ။
ဒါပေမဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ် သမိုင်းမှတ်တမ်းရေးထိုးနိုင်ဦးမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒိုအနေနဲ့ အမျိုးသားဘောလုံးသမားတွေထဲမှာသာ သွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပေမယ့် အမျိုးသား+အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုရင် နောက်ထပ်(၇၈)ဂိုးအထိ သွင်းယူဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။
အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို၊ မက်ဆီတို့ထက် နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးပိုများတဲ့သူတစ်ဦးရှိပြီး သူမနာမည်ကတော့ ခရစ္စတင်းဆင်ကလဲယားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်(၃၈)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်သူ ကနေဒါလက်ရွေးစင်အသင်းခေါင်းဆောင် ဆင်ကလဲယားဟာ တိုက်စစ်မှူးတစ်ဦးဖြစ်ပေမယ့် အများအားဖြင့်တော့ ကွင်းလယ်တိုက်စစ်ကစားသမားနေရာမှာသာ ကစားလေ့ရှိပါတယ်။
သူမဟာ ကနေဒါအသင်းအတွက် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ကစားခဲ့သလို လက်ရှိအချိန်အထိဘောလုံးကစားနေဆဲဖြစ်ပြီး (၂၉၉)ပွဲကစား၊ (၁၈၆)ဂိုးအထိသွင်းယူထားတာပါ။ ဆင်ကလဲယားဟာ ကနေဒါအသင်းနဲ့အတူ အမျိုးသမီးကမ္ဘာ့ဖလား(၅)ကြိမ်၊ အိုလံပစ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ(၂)ကြိမ်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး ကြေးတံဆိပ်ဆုတွေဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆင်ကလဲယားအတွက် ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတာက အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုးအများဆုံးအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အက်ဘီဝမ်ဘက်ခ်ျရဲ့ (၁၈၄)ဂိုးစံချိန်ကို ချိုးဖျက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး (၁၀၉)ဂိုးအထိသွင်းယူခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အမျိုးသား+အမျိုးသမီးဘောလုံးသမားတွေထဲမှာ သွင်းဂိုးအများဆုံးဖြစ်ဖို့အတွက် ဆင်ကလဲယားရဲ့စံချိန်ကို ချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်နေပြီး အဲဒီလိုဖြစ်ဖို့က နောက်ထပ်(၇၈)ဂိုးအထိ ဆက်လက်သွင်းယူရဦးမှာပါ . . .
စီရျောနယျဒိုလို လူမြိုးအတှကျ အထိုကျတနျဆုံး ဈေးအကွီးဆုံး Rolex နာရီ